प्रधानमन्त्रीले लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रधानमन्त्रीले लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छवी व्यग्य, टुक्का र उखानवाट तार्कीक वहस गर्ने नेतामा गनिन्छ । उनी कुनै पनि विषयवस्तुलाई निकै चोटिलो पाराले उठाउँछन् । मंगलवारको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो व्यग्य गरे । सरकारी कार्यालय तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम सुचारु गर्ने नाममा काठमाडौंमा लकडाउनका क्रममा पनि निकै भिडभाड देखिएको छ । सडकमा सवारी साधनको जाम छ । सार्वजनिक भएका तस्बिरहरुले लकडाउनको औचित्य नभएको पुष्टि गरेको छ । सोही कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सुरु देखि नै लकडाउन कडा बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौंको अहिलेको अवस्थाले असन्तुष्ट छन् । दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मान्छेको जीवनभन्दा आर्थिक गतिविधि ठूलो होइन भन्दै लकडाउनमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोही कुरालाई दोहोर्याएका हुन् । उनी काठमाडौंको अहिलेको अवस्था देखि निकै आक्रोशित देखिन्थे । अहिलेको अवस्थालाई लकडाउन भनिँदैन भन्दै कडारुपमा प्रस्तुत भए । एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
‘काठमाडौंमा लकडाउन छ र ? प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्न सुरु गर्दा भनेको वाक्य हो यो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘यसलाई लकडाउन भनिँदैन । आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्छ भन्ने नाममा लकडाउन खुकुलु बनाउन नहुने उनको तर्क थियो । जीवन रहे अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने बताए । उनले सुनको बाक्सामा मान्छे राखेर के गर्नु, मरेपछि त सक्किगो नि । ’
बैठकमा लकडाउनबारे कुनै एजेण्डा नभएपनि प्रधानमन्त्री ओली भने त्यसैमा केन्द्रित भए । उनले आफ्नो असन्तुष्टि बैठकमा पोखे । पछिल्लो अवस्थाले झन लकडाउनको औचित्य पुष्टि भएको उनको भनाई थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठककै बीचमा पर्सा, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा आज मात्रै ५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको खबर पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अवस्थाले नचल्ने भन्दै मन्त्रीहरुलाई लकडाउन थप कडा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
राजधानीमै भोको पेट सडकमा निस्किन थाले मजदूर, सरकार कहाँ छ ?
ख’तरा बढ्दै गएपछि उपत्यका छिर्ने नाकामा पैदल यात्रीलाई समेत यस्तो क’डाइ !
२० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै बजाज बाइक !
एसएसबीको धम्की खाएर हामीले पिलर जोगाइरहेका छौं , हामीलाई भारतीय भनेर हेप्दा मन दुख्छ
अब नेपाली श्रमिक छ महिनाभित्र यी देशमा जान पाउने [हेर्नुहोस्]